“तिमी को हो?” मेरो प्रश्न थियो! उसले भनी, “खुशी” । “को खुशी”, मैले सोधेँ ! “ह्या, कस्तो नचिन्या होला? म खुशी के ! रहर, छायाँ, खुशी जे भने नि म नै हो के”, उसको जवाफ ! “ए, तिमी पो, कता हराकी थियौ? अब के भनौँ त तिमीलाई उसोभए?” “जे भने नि हुन्छ!” “उसोभए म खुशी भन्छु है”, मैले भनेँ ! उसले हुन्छ भन्ने जनाउ दिन, आँखा सन्काइ र लेखी “हे हे” । कुरा यसरी नै सुरु भएको थियो च्याटमा ! च्याटमा को सँग कुरा गरिरहेछु, आफैँलाई पत्तो छैन, न पहिले च्याट गरिएको थियो, न भेट नै गरिएको थियो । ट्विटरमा नाम परिवर्तन गरिरहने ऊसँग ट्विटरमा आक्कल झुक्कल कुरा गरिने भएपनि उनको ‘म्यासेज’ पहिलोपल्ट च्याटमा अकस्मात आइपुगेको थियो ! म उनको बारेमा प्रस्ट हुन सकिरहेको थिँइन ! अत: फेरि सोधेँ, “यो खुशी को हो?” मेरो प्रश्नले, उसले आफू दुखित भएको जनाउ दिन लेखी “:(” “हैन किन यति रिङ्ग्याएको मलाई”, मैले सोधेँ । “नाम मे क्या रखा है? ;)”, उसको जवाफ ! “नाममा धेरै कुरा राख्या छ हजुर, चिन्नु त पर्यो नि, आफू कोसँग कुरा गर्दैछु भनेर”, मैले भनेँ ! “पिक द नेम, तिम्लाई जुन मन पर्छ त्यही राख”, उसले मलाई नाम छान्ने अधिकार दिई ।
Shramik Park Where Gautam Buddha Works (श्रमिक पार्क) [PHOTO]
Aakar March 24, 2012
आज टिएफसी नेपाल , नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुको समूहले १ वर्ष पुरा गरेकोछ । गत वर्ष सुरु भएको यो समूहले १ वर्षको बिचमा विभिन्न पाँचवटा ठाउँमा आफ्नो सहयोग कार्यक्रम गरिसकेकोछ । पछिल्लो पटक हामी गतसाल डिसेम्बरमा उदयपुरको गाईघाट गएका थियौँ, टिएफसीको पाचौँ मिसनको लागि । हामीले टिएफसी मार्फत उदयपुरमा रहेको दृष्टिविहिन स्रोत कक्षाका दृष्टिविहिन विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गरेका थियौँ ! माथि यति धेरै भुमिका त बाँधे तर अब यहाँ राख्न खोजिएको कुरा भने फरक छ ! समग्रमा भन्दा गाईघाट जाँदा खिचिएको श्रमिक पार्कको फोटोहरु यहाँ राख्दैछु । स्रस्टा स्मारक, श्रमिक पार्क, ज्ञानविज्ञान कुञ्ज, भगवती पर्यटन क्षेत्र आदिको नामले प्रचलित पार्कमा विभिन्न देवदवताको मुर्तिका साथै नेपाली जनजिवन झल्कने मुर्तिहरु छन् । पार्कको बिचमा गौतम बुद्धको श्रमिक रुप झल्कने मुर्ति राखिएकोछ । श्रमिक पार्कको रुपमा त्यस पार्कलाई चिनाउने प्रयत्न गरिएको भएपनि, पार्कको निर्माण सम्पन्न भएकोछैन । पार्कको काम हुँदा हुँदै विविध कारणले, पार्कको काम रोकिएको रहेछ । तर पनि गाईघाट पुगियो भने, एकपटक श्रमिक पार्क चाँहि जानै पर्ने ठाउँ रहेछ ! पार
नेपाल र ट्विटर ट्रेन्डस
Aakar March 16, 2012
ट्विटरमा एकाबिहानै जी. पौडेल (@gpoudel) को फोटो सहितको ‘मेन्सन’ आएको रहेछ, गएराती “नेपाल” ट्विटरको ट्रेन्ड टपिकमा देखियो भनेर ! हामीले हत्तपत्त रिट्विट गर्यौँ, नेपाली ट्विटर प्रयोगकर्ताहरुले आपसमा खुशी पनि साटासाट गरे तर केही छिनमै हल्ला फैलियो, हैन नेपाल ट्विटरमा देखिएकै छैन, पौडेलले सबैलाई झुक्याए, त्यो त ‘फोटोसप’ गरेको ‘फेक’ फोटो हो, आदि इत्यादी ! केहीले भन्नु नभन्नु, केही बाँकी राखेनन्, त्यो देख्दा चाँही नराम्रो लाग्यो ! फोटो सहित गरेको ट्विटलाई आधारहिन भन्दै ‘फेक’ फोटो र ‘फेक’ ट्रेन्ड भन्दै, ट्विटगर्ने र ती ट्विट रिट्विट गर्नेको बाढि नै आयो । ती ट्विटहरु देखेपछि मलाई ‘नेपाल’ ट्रेन्ड भएको भएपनि खासै उत्साहित बनाएन ! ट्विटरको टाइमलाइन हेर्नै दिक्क लाग्नेगरि ट्विट आउन थालेपछि, केही ट्विटर टुलहरु चलाएर हेरेँ ! नेपाल ‘ट्रेन्ड’ भएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउन, ट्विटको, सोसलमेन्सन, टप्सी आदि ‘साइट’हरुमा धाइयो तर ‘नेपाल’ को नाम निशान कहीँ भेटिएन ! जी. पौडेल सँग पहिले पनि ट्विटरमा कुराकानी भइरहने भएका कारण, पौडेलको ट्विट र फोटो सही छ भन्ने विश्वासमा म थिँए ! अत: पहिले जी. पौडेल सँग नै क
ट्वीटरसँगका आफ्ना अनुभवहरु [नितान्त व्यक्तिगत]
Aakar March 01, 2012
ट्वीटर चलाउँदा बेग्लै किसिमको रमाइलो हुन्छ, चाहे सूचना समाचार होस् वा सन्चो विसन्चो सोध्न होस् वा अन्य नयाँ कुरा थाहा पाउन वा साथी बनाउन नै होस्, हरपल हरक्षण ट्विटरमा भुलिरहन मनलाग्छ ! केही साथीहरुलाई भर्खरै पनि ट्विटर चलाउन आग्रह गरेँ, यो ट्विटर फेसबुक भन्दा के फरक छ, यसबाट के हुन्छ भन्ने किसिमको जवाफ पाँए ! मेरो सुझाव थियो, रेगुलर एक हप्ता जसरी नि चलाउ, आफैँ थाहा हुन्छ ट्विटर भनेको के हो भनेर ! अनि ट्विटर चलाउनेहरुलाई ट्विटर के हो भनेर, बुझाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन ! माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरको बारेमा सबैको आ-आफ्नै किसिमको धारणा होला, अनि यसको प्रायोजनको कारण पनि सबैको लागि फरक-फरक नै होला । कोही ट्वीटर रमाइलोको लागि चलाउँछन्, कोही आफ्नो विचार प्रवाह गर्न चलाउँछन्, कोही सूचना तथा समाचारको लागि प्रयोग गर्छन्, कोही साथीसँग नजिक भइरहनको लागि प्रयोग गर्छन्, कोही आफ्नो व्यापार-व्यवसायको प्रचारप्रसारको लागि प्रयोग गर्छन् । ट्वीटर जसले जसरी पनि चलाउन सक्छ, राम्रो सँग चलाएको खण्डमा रमाइलो हुन्छ, राम्रो प्रतिफल निस्किन्छ ! ट्वीटरको दुरुपयोग गरेको खण्डमा प्रतिफल नराम्रो नै हुन्छ । १४० “
भीम विरागको सिंगो आकाश
Aakar February 28, 2012
बिहानै एक जना मित्र राजेश केसीको ट्विटमा ‘भीम विराग आर. आइ. पी.’ भनेर लेखिएको देख्दा एक पटक आङ्ग ढक्क फूल्यो । हुन त भीम विरागले ७८ वर्षमा टेकिसकेका थिए । पोहोर साल पनि बेस्मारी बिरामी परेका थिए । यस पटक पनि अस्पतालमा भर्ना भएको कुरा केही दिन अघि थाहा भएको थियो । भेट्न जान पाइएको भने थिएन । संसारमा कसैको पनि अजम्मरी देह हुँदैन भन्ने पनि थाहा नभएको कहाँ हो र ? तर यति सबै हुँदाहुँदै पनि त्यो ट्विट लाई आँखाले सही पढे पनि मनले एकै पटक स्वीकार गरेन । दुइ पटक पढेपछि मात्र जिन्दगीको अन्तिम र कटु यथार्थ घन बनेर दिमागमा ठोक्कियो । भीम विराग रहेनन् । व्यक्तिगत रुपमा पनि संगत गर्ने अवसर पाइएका मान्छेहरुको अवसानले अलि धेरै बिचलित बनाउँछ । भीम विरागसंग पनि पछिल्लो समयमा थोरै तर सार्थक र आत्मीय संगत गर्न पाइएको कारणले होला, मन एकतमासको भएर आयो । मित्र आभासलाई फोन लगाएँ, उनले पाटन अस्पतालमै हो भनेपछि त्यता तिर हुइँकिंदा ती केही भेट र उनका कुराहरु मनमा खेलिरहे । उनले एकपटक गुनासो गरेका थिए, “मैले सिंगो आकाश कहिले पनि हेर्न पाइनं ।” उनको संकेत आफ्नो कुप्रिएको शरीर प्रति थियो । ठाडो भएर उभिन नसकेकोमा उन